Ny Galaxy S7 dia hanana kinova Plus | Androidsis
Ny Galaxy S7 dia hanana kinova Plus
Amin'ny volana voalohany amin'ny taona ho avy, 2016, ny orinasa Koreana Samsung dia hanolotra izay ho vavahadin-tsoratr'izy ireo manaraka, ny Galaxy S7. Ny sainam-pirenena dia ho iray amin'ireo terminal tsara indrindra hivoaka eny an-tsena mandritra ny taona 2016, noho izany dia avo dia avo ny fanantenana amin'ny fitaovana, satria efa niaraka tamin'ny taranaka ankehitriny, ny Samsung Galaxy S6,
Tato ho ato dia nanapa-kevitra i Samsung fa i Barcelona no toerana mety indrindra hanolorany ny lohany. Efa nanao izany tamin'ny Samsung Galaxy S5 sy S6 ary S6 Edge izy ireo. Nohararaotin'ny mpanamboatra ny fisintomana izay natolotry ny Mobile World Congress tamin'ny mpanao gazety sy ny besinimaro ny finday tsara indrindra novokarin'izy ireo.
Na izany aza, misy ny tsaho milaza fa ny kinova fahafito an'ny Galaxy dia haseho amin'ny fiandohan'ny taona, indrindra mandritra ny volana Janoary, noho izany, Samsung dia tsy hanolotra ny terminal vaovao mandritra ny MWC16 satria ity hetsika ity dia natao hatramin'ny volana febroary. 22 hatramin'ny 25.
Nahita tsaho vitsivitsy momba ny fitaovana ho avy toy ny hoe S7 dia ho avy miaraka amin'ny seranan-tsambo USB-C vaovao, seranan-tsambo izay hivoatra mandritra ny taona vitsivitsy ary ho hitantsika amin'ny fitaovana rehetra izy, toa ny fahitantsika ny port micro-USB ankehitriny. Mitohy amin'ny Galaxy S7, misy ny resaka fa ilay fitaovana dia afaka mampiditra zava-baovao tsy mbola fahita tao amin'ny tsena finday hatramin'izao, a efijery fametahana.
Araka ny tsaho farany, Samsung dia afaka mampiditra ny efijery aforany amin'ny Galaxy S7, ity no zava-baovao farany amin'ny terminal. Noho izany dia tsy ho efijery miolaka intsony izy ireo toa ilay ampidirin'ny Galaxy S6 Edge, fa ny efijery kosa azo avadika tanteraka, zavatra efa hitantsika teo aloha, fa mbola tsy hitantsika tamin'ny finday avo lenta.
Etsy ankilany, misy ny resaka fa ny kinova telo dia mety hahatratra ny tsena, ny Galaxy S7 mahazatra, ny Galaxy S7 Edge misy efijery miolaka ary ny Galaxy S7 miaraka amin'ny efijery aforitra. Samy mihoatra ny haben'ny 5 santimetatra ireo terminal roa ireo. Hisy ihany koa ny dikan-teny Plus, izay havoaka taty aoriana, toy ny nitranga tamin'ny Galaxy S6 Plus vaovao sy S6 Edge Plus.
Mikasika ny kinova mahazatra dia voalaza fa hampiditra seranana iray izy io USB-C, efijery Super AMOLED miaraka amin'ny fanapaha-kevitra 4K, mpikirakira azy Exynos manokana, na dia misy aza loharanom-pahalalana manondro fa afaka mampiditra processeur Qualcomm indray i Samsung, ka tsy hahagaga raha nampiditra ny Snapdragon 820. Misy koa ny resaka mety ampidirin'ny fitaovana a slot karatra microSD, Fahatsiarovana RAM 4 GB, Samsung Pay ary, lisitra vaovao iray lava.
Araka ny hitanao, amin'izao fotoana izao, tsaho daholo, ka tsy maintsy hitandrina isika amin'izay mety hitranga amin'ny fitaovana manomboka eto mandra-pahatongany. Ary ianao, Ahoana ny hevitrao momba izany ?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Galaxy S7 dia hanana kinova Plus
Viva Sancho Villa, sehatra Hack & Slash avo lenta amin'ny lafiny rehetra
Mos Speedrun 2, sehatra feno devoly ary mahafinaritra mahafinaritra